Khel Paper | सिलवाल माथी यती गंभिर आरोप किन लाग्यो?
Uncategorized / सिलवाल माथी यती गंभिर आरोप किन लाग्यो?
सिलवाल माथी यती गंभिर आरोप किन लाग्यो?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल माथी गण्डकी प्रदेश सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङगेले लगाएको आरोप अति नै गम्भिर र संगिन छ । गुरुङले विगतमा गण्डकी प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुदा देखेको वेथितिपछि आफुले यस्तो आरोप लगाएको दावी गरेका छन् ।
उनले लगाएको आरोप पछि राखेपका निमित्ति सदस्य सचिव पुरेन्द्र विक्रम लाखेले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गुरुङको भनाईको विरोध गर्दै कडा कारवाहीको माग समेत गरेका छन् । गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए लगत्तै एक स्थानिय टेलिभिजनलाई दिएको अन्र्तवार्तामा राखेप सदस्य सचिव सिलवाल र परिषदका सदस्य राजेश गुरुङको मिलिभगतमा खेलकुदमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप मात्र लगाएनन् । उनले सिलवालको चरित्र र सार्वजनिक जीवनमाथी पनि गंभिर आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सांसद गुरुङको भनाई सार्वजनिक हुदै गर्दा राखेपका सदस्य सचिव सिलवाल भने विदेश भ्रमणमा थिए । उनी नेपाली फुटवल टोलीसँग इराक र कुवेतको भ्रमणमा निस्केका थिए । उनी सोमवार मात्रै नेपाल फर्केका थिए । यो विषयमा राखेप सदस्य सचिव सिलवालको आधिकारीक धारणा बाहिर आएको छैन । उता राखेप सदस्य राजेश गुरुङले भने आफु माथी लगाएको आरोपको विषयमा विरोध जनाएका छन् । राखेप सदस्य सचिव सिलवाल पछिल्लो समय पोखरा आउने जाने क्रम बढी भएको र अर्का सदस्य राजेश गुरुङलाई उनले चाहिने भन्दा बढि नै जिम्मेवारी दिएको आरोप पनि मनाङगेको छ ।
मनाङगेकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने सिलवाल ‘मोज’ गर्नका लागी पोखरा बढी आउने गरेका हुन् । यो आरोपलाई लिएर नेपालको खेल क्षेत्रमा चर्चा पनि धेरै भएको छ । प्रदेश सांसद जस्तो मान्छेले एउटा जिम्मेवार तहमा बसेको ब्यक्तिलाई लगाइएको यस्तो आधारहिन आरोपले खेल क्षेत्रलाई भलो नगर्ने र अराजकता बढ्ने निष्कर्ष खेलका जानकारहरुको छ ।